ဖန်မျှင်ထည်တိပ်, ဖန်မျှင်ထည်ကွက်, mesh တိပ်, အပူပိုင်းအမှတ်တရတိပ် - QuanJiang နယူးပစ္စည်းများ
ကို C-Glass ကို Fiber ချည်ခင် & Roving
ကို C-Glass ကို Fiber အမြင့် Twisted ချည်ခင်
ကို C-Glass ကို Fiber Roving
ကို C-Glass ကို Fiber Twisted ချည်ခင်
AR ဖန်မျှင်ထည်ချည်ခင် & Roving
AR ဖန်မျှင်ထည် Roving
(ZrO2 နှင့်အတူ) အယ်လကာလီကိုခံနိုင်ရည်ဖန်မျှင်ထည် mesh
(ZrO2 မပါဘဲ) အယ်လကာလီကိုခံနိုင်ရည်ဖန်မျှင်ထည် mesh
မီးနှောင့်နှေး Fiberglss ကွက် / EIFS ဖန်မျှင်ထည် mesh
ကိုယ်ပိုင်ကော်ဖန်မျှင်ထည် mesh * တိပ်
self-ကော်ဖန်မျှင်ထည် mesh တိပ်
self-ကော်ဖန်မျှင်ထည်ကွက် / ဖန်မျှင်ထည် GRC နှင့် EPS မော်ဒယ် mesh
ဖန်မျှင်ထည် Drywall ပူးတွဲ mesh တိပ်
Hangzhou QuanJiang အသစ်ကအဆောက်အဦးပစ္စည်းများ Co. , Ltd မှ
HAGNZHOU QUANJIANG အဆောက်အအုံသစ်ကုန်ကြမ်း CO ။ , LTD မှ 1994 ခုနှစ်တစ်နှစ်အတွင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံ AR (ZrO2) ဖိုက်ဘာမှန်ကြိုးတင်ပို့, တရုတ်အတွက်ဖိုက်ဘာမှန်ကြိုး၏အကြီးမားဆုံးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။
23 နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသောဖိုက်ဘာမှန် mesh များနှင့်မိမိကိုယ်ကိုကော်ဖိုက်ဘာမှန်ထုတ်လုပ်မှု mesh & တိပ်, ကြိုးဖန်မျှင်ထည်မှမြှုပ်နှံခံရ။
self-ကော်ဖန်မျှင်ထည်ကွက် / ဖန်မျှင်ထည် mesh ...
စက္ကူ Drywall ပူးတွဲတိပ်
မီးနှောင့်နှေး Fiberglss ကွက် / EIFS ဖန်မျှင်ထည် ...
နောက်ထပ် View >>
Analysis on the future prospect of FRP an...
FRP isahard job. I believe no one in the industry denies this. Where is the pain? First, the labor intensity is high, second, the production environment is poor, third, the market is difficult to develop, fourth, th...
Magic as you – fiberglass!
In the late 1920s, during the great depression in the United States, the government issuedawonderful Law: prohibition. The prohibition lasted for 14 years, and wine bottle manufacturers were in trouble one after ano...
What is the difference between seam tape ...
In the house decoration, if there are cracks on the wall, it is not necessary to paint all, just use joint paper tape or grid cloth to repair it, which is convenient, fast and saves money, although both of these can b...
Inform, please pay attention
According to the information from management and production department today, there isaNew energy management policy for electricity (ration the power supply / rolling power cuts), we can only keep 40% production cap...
The use of fiberglass mesh
The fiberglass mesh is based on glass fiber woven fabric, and is coated withahigh molecular anti-emulsion soaking. It has good alkali resistance, flexibility, and high tensile strength in the warp and weft direction...
Zhu Jia ဘူစက်မှုလက်မှုဇုန်, XinAnJiang မြို့, JianDe စီးတီး, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်
ယခုကျွန်တော်တို့ကို Call: + 86-18126537057